समाज Archives - Page 182 of 189 - Dna Nepal
बोक्सीखोलाको चिनो चौंरीको चीज १३ माघ २०७४, शनिबार ०४:४६
सुन्दरकुमार थकाली मुस्ताङ, माघ १३ । किसानी गरेर गुजारा चलाउन नेपालमा सजिलो छैन । किनकी नेपालको खेती किसानी आधुनिक भैसकेको छैन । विहान बेलुकीको गर्जो टार्ने माध्ययम मात्रै हो । अचेलभरी केही किसान चाहीँ फरक पहिचान बनाउने लक्ष्यले फरक हिसावको..
कास्कीबाट थपिएका शहीदको इतिहास यस्तो छ (पढ्नुस् विस्तृतमा) १२ माघ २०७४, शुक्रबार ११:०१
प्रकाश ढकाल पोखरा, माघ १२ । कास्कीबाट ९ जना शहीद थपिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाको प्रश्तावमा बिहिबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई शहीद घोषणा गरेको हो । तत्कालीन सशस्त्र द्धन्द्धका बेला माओबादीबाट..
कास्कीबाट ८ शहीद थपिए (को–को परे ?) ११ माघ २०७४, बिहीबार १४:३३
प्रकाश ढकाल पोखरा, माघ ११ । कास्कीबाट ७ जना शहीदको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाको प्रश्तावमा बिहिबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शहीद घोषणा गरेको हो । साविक सल्यान गाविसका कृष्णबहादुर गुरुङ,..
नेपाली भूमी एक इन्च पनि भारतलाई छोड्दिन–देउवा
काठमाण्डौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक इन्च नेपाली भूमी भारतलाई नछोड्ने बताएका छन् । पर्साको छपकैयामा सीमा मिचिएको बारे ध्यानाककर्षण गराउन पुगेको विद्यार्थीहरुको टोलीहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।..
भूकम्पपीडितलाई १ लाख अनुदान बढाउने सरकारको निर्णय (बनेका घरको के हुन्छ ?) १० माघ २०७४, बुधबार १६:२६
पोखरा, माघ १० । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप एक लाख दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले ३ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । कुनै अध्ययन र माग बिना नै सरकारले सस्तो..
गौचन हत्याका मुख्य सुटर पक्राउ ९ माघ २०७४, मंगलवार ०७:२७
काठमाण्डौं, माघ ९ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलाई गोली हान्ने मुख्य सुटरलाई प्रहरीले आज बिहान चितवनबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र रुपन्देही प्रहरीको टोलीले मुख्य सुटर श्याम लामा..
तीन वर्षमा २० हजार बेपत्ता
काठमाण्डौं, माघ ९ । नेपालमा दैनिक १७ नागरिक बेपत्ता हुन्छन् । प्रहरीको तथ्याकं अनुसार ३ बर्षमा देशभरबाट १८ हजार ९१८ बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या धेरै छ । हरेक वर्ष बेपत्ता हुनेको संख्या बढिरहेको छ । बेपत्ता..
माओवादीका मन्त्रीले फर्काएनन् गाडी, प्रदेश प्रमुखलाई अभाव ५ माघ २०७४, शुक्रबार १०:४८
काठमाडौं, माघ ५ । माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि पनि गाडी नबुझाएपछि प्रदेश प्रमुखका लागि गाडी अभाव भएको छ । उनीहरुका लागि तत्काल गाडीको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ । लामो समय बिनाविभागीय मन्त्री..
चियागफमा सकियो कास्कीको भूकम्पिय सुरक्षा दिवस २ माघ २०७४, मंगलवार ०४:५८
पोखरा, माघ २ । नेपाल भूकम्पिय दृष्टीले बहुत जोखिमको क्षेत्र हो । त्यसमाथी पोखरा, झनै जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरुको रिपोर्ट छ । नयाँ माटोले बनेको पोखरामा हल्लिने गरी भूकम्प आएकै छैन भन्छन्–भुगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी । उनको गुनासो पनि छ, पोखरामा..
राष्ट्रपतिमा दोहोरिने भण्डारीको इच्छा, खनाल पनि लविङमा
काठमाडौं, माघ २ । विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिमा दोहोरिने इच्छा ब्यक्त गरेकी छिन् । भण्डारी र बर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुवैले फेरि एक कार्यकाल दोहोरिने इच्छा देखाएका हुन् । स्रोतका अनुसार दुवै जनाले दोहोरिने इच्छासहित आन्तरिक लबिङ..